China Custom eyeshadow palette labozia manokana cosmetics vokatra makiazy eyeshadow palette mpivarotra sy mpamatsy | Iris Beauty
Palitao eyeshadow manokana marika fanatsarana tarehy tarehy tarehy mpivarotra eyeshadow palette mpivarotra
Ny lokon'ny eyeshadow pigment avo dia manomboka amin'ny mattes sy satin ka hatramin'ny shimmers sy glitters. Raiso ireo palette ireo isan'andro na alina amin'ny flash miaraka amin'ireo loko mety ho azo raisina!
Loko eyeshadow misy loko marevaka, volon'ondry malefaka malefaka sy marefo, fanitarana tsara, mba hahafahanao miloko ny loko, ny vokany maharitra, voajanahary ary manintona, tsy misy vovoka, tsy misy loto.
Manankarena sy marevaka ny loko. Thepalette eyeshadow ny loko dia miainga amin'ny matte sy satin ka hatramin'ny shimmers sy glitters, noho izany ny tonony dia afaka miovaova amin'ny zoro amin'ny hoditra ary misy vokany hafa, izay afaka mampifanaraka ny fisehoanao amin'ny vokatra voajanahary sy mamirapiratra.
Ireo akora avo lenta dia misy famirapiratany milamina, izay afaka manazava ny lokon'ny hoditra nefa tsy mahasosotra ny hoditra, ary maharitra ny vokany makiazy. Raiso ny palitao iray isan'andro na alina amin'ny flash miaraka amin'ireo loko mety mitambatra rehetra!
Anaran-javatra Palette Eyeshadow
2. Maimaimpoana ny zavamaniry / talc
3. Maharitra sy tantera-drano
5.Pigmentation lehibe, firafitra tsara
2.Q: Firy ny loko anananao amin'ny eyeshadow?
A: Lokon'ny eyeshadow total dia manana loko 140 ho anao izahay ary afaka manamboatra ny lokonao manokana ihany koa.
3.Q: Ahoana no ahazoako santionany hijerena ny kalitao?
4.Q: Manaiky OEM ve ianao ODM ary Azonao atao ve ny manao ny endrika ho anay?
5.Q: Mandra-pahoviana no mety antenaiko hahazoana ilay santionany?
6.Q: Ahoana ny amin'ny fotoana firy amin'ny famokarana betsaka?
7.Q: Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
8.Q: Ahoana ny fomba hifandraisana anay?
Previous: fomban'ny molotra fanao manokana marika manokana glitter lip gloss plumper vegan shimmer lipgloss base
Manaraka: Palety eyeshadow marika manokana fividianana volom-borona eyeshadow paleta eyeshadow voajanahary
tarehy makiazy tarehy paleta eyeshadow
palitao eyeshadow manokana
marika manokana palette eyeshadow
mpivarotra palety eyeshadow
palette eyeshadow manokana
ambongadiny eyeshadow palette vegan pigment avo ...
makiazy pensilihazo eyebrow marika manokana last lastin ...
Palette eyeshadow makiazy namboarina manokana lab ...
Palette eyeshadow manokana marika manokana fampiasa amin'ny ankapobeny ...